ဘ၀င်မကျတာလေးထဲက ဘ၀င်မကျတာလေးတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » ဘ၀င်မကျတာလေးထဲက ဘ၀င်မကျတာလေးတွေ
Posted by စဆရ ကြီး on Nov 27, 2011 in Think Different | 11 comments
အန်တီဝေရေးထားတဲ့ သဘောမကျတာလေးတစ်ခုကို ၀င်ဖတ်ရင်း၊ မန့်ရင်းနဲ့ သဘောမကျတာလေးတွေ့လို့ ကိုယ့်ဖာသာ ထပ်မန့်ချင်တာလေး ရေးတင်လိုက်တယ်။ သူများတွေ ဘယ်လိုမြင်လဲသိချင်တာလဲပါတယ်။ ပေးချင်တဲ့ အတွေးလေးတွေလဲပါလို့ ကိုယ့်ဖာသာ သတ်သတ်တစ်ပုဒ်တင်လိုက်တယ်။
မြန်မာတွေ ရှေးကတည်းက ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် မြင့်မြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မဟာ ပုရိသ အနွယ်ဝင်တွေ၊ ဘာသာရေးအရ မကောင်းဘူးလို့ပြောထားတဲ့ သူရာမေရယ၊ သူတစ်ပါးသားသမီးကို မပြစ်မှားရဆိုတဲ့ ကာမေသု မိစ္တာစာရ၊ အဲဒီနှစ်ချက် တည့်တည့်ကြီး ဖောက်ပြန်နေကြသူအများစု အိမ်မှာကျတော့ အိမ်ထောင်ဦးစီးမို့ သိပ်မြင့်မြတ်တဲ့အတွက် အခွင့်ထူးခံချင်ကြတယ်လား။ စဉ်းစားပါ မောင်ရင်။ ၉၅% ခန့်သော မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ အဲဒီနှစ်ချက်ကို မဖောက်ပြန်တတ်ကြဘူးဆိုတာ မြန်မာပြည်မှာမွေး၊ မြန်မာပြည်မှာကြီးလာတဲ့သူတိုင်း သိကြမှာပဲ။ အဲဒီတော့ ဘာသာရေးအရကြည့်မယ်ဆိုရင် သီလရှိသူကသာ ပိုမြင့်မြတ်ရိုး မဟုတ်ပေဘူးလား။ ဘာသာတရားကို လိုသလိုဆွဲသုံး၊ ကိုယ့်ကိုထိခိုက်မယ်ထင်တာတွေကျတော့ လျှိုထား၊ ဘာမြင့်မြတ်တဲ့ ယောကျာ်းတွေလို့ထင်သတုန်း။
ကိုယ့်ကို(လင်ယောကျာ်းလို့ဆိုသူကို) လေးစားသမှု လျော့လာတယ်ဆိုတာလည်း အကြောင်းရှိတယ်။ တစ်ချိန်က ယောကျာ်းတစ်ယောက်ဟာ မိသားစုတစ်စုကို ၀မ်းဝအောင်၊ ခါးလှအောင် ကျွေးနိုင်တယ်။ မိန်းမဆိုသူတွေက အိမ်မှာ အိမ်အလုပ်လေးလုပ်ရင်း သက်တောင့်သက်တာ လှလှပပ၊ ကျော့ကျော့မော့မော့လေး နေနိုင်ကြတော့ ကျေးဇူးရှင် လင်ယောကျာ်းတွေကို ရိုသေဂါဝရတရား ထားကြတာပါ။ ခုချိန်မှာ ဘယ်သူက လောက်လောက်ငှငှ ရှာနိုင်တော့လို့လဲ။ သူလဲ ကိုယ့်လိုပဲ ရှာဖွေနေရပြီမလား။ ဒီတော့ တစ်ချိန်က ငွေရှာနိုင်သူကို ရိုသေလေးစားခဲ့ကြသလို ခုချိန်မှာလဲ သူ့ကို ကိုယ်က ရိုသေလေးစားမှုမပေးနိုင်တောင် နှိမ့်ချဖို့ မသင့်ဘူးထင်တယ်။
နောက်တစ်ချက်၊ မိန်းမတွေသဘာဝ လစဉ်ဖြစ်နေကျ။
ဒီလိုဖြစ်နေလို့ မိန်းမတွေကို ယုတ်ညံ့တဲ့အမျိုးလို့ မြန်မာတွေ သတ်မှတ်ကြတယ်။ ဒါက ရှေးက ပညာမတတ်ခဲ့သူတွေရဲ့စကား။ ခေတ်ပညာသင်ကြားဖူးသူတိုင်း မိန်းမတွေ ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရသလဲဆိုတာ သိကြမှာပဲ။ ဒီလိုဖြစ်နေလို့လဲ “လူ” ဆိုတဲ့ မျိုးနွယ်စု အဓွန့်ရှည် ကြီးပွားလာရတာ မဟုတ်ပေဘူးလား။ အဲလိုမဖြစ်တဲ့မိန်းမ ဘယ်မှာ လူဖြစ်အောင် မွေးထုတ်ပေးနိုင်လို့လဲ။ အဲလိုဖြစ်ကြတာလဲ တစ်လမှာမှ ၃/၄ ရက်။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်မပြောလဲ သူတို့ဖာသာ ခွဲခြားလျှော်ဖွပ်နေကြ။
ဘဇာကြောင့်များ လူနှင့်လူချင်းတူပါရိုးနဲ့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ချင်ကြတာတုန်း
ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် အဲလိုနိမ့်ကျတဲ့ မိန်းမတွေနဲ့ ဘယ်ယောကျာ်းကများ ကင်းကင်းကွာကွာ နေနိုင်ကြပါသတုန်း။ အချင်းချင်း အပြန်အလှန်လေးစားသမှု ထားစေချင်သပေါ့ဗျာ။ လူနဲ့လူခြင်း ခွဲခြားခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေကြောင်း…
ကျနော်တော့လေ ယုတ်ညံ့တယ် လို့ တစ်ခါမှတောင်မတွေးမိသလောက်ပဲ…၊
တစ်ယောက်ရှာစာနဲ့ မလောက်ငှတော့တဲ့ ဒီခေတ်မှာ ဒိုးတူဘောင်ဖက် လုပ်ကိုင်
အပြန်အလှန်လေးစားရမယ်ဖြစ်သလို ခွဲခြားဖို့ မသင့်လျော်ပါခင်ဗျား…။
ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေး ရင်ဘောင်တန်းနေတဲ့ခေတ်မှာ မခွဲခြားပါဘူးဗျာ။ နှစ်ယောက် တိုင်တိုင်ပင်ပင် ညှိညှိနှိုင်းနဲ့ဘဝကို ဖြတ်သန်းတာ အကောင်းဆုံးပေါ့။
‘မိန်းမဆိုသူတွေက အိမ်မှာ အိမ်အလုပ်လေးလုပ်ရင်း သက်တောင့်သက်တာ လှလှပပ၊ ကျော့ကျော့မော့မော့လေး နေနိုင်ကြတော့ ”
လူပျိုကြီး ကိုရှုံး တော့ အထု ခံရဦးမယ်..
“ရှင် တို့က အိမ် အလုပ်ဆိုတာ လွယ်လွယ် လေး၊ သက်တောင့်သက်သာ မှတ်နေလား ၊ တစ်နေ့တစ်နေ့ ရှင်တို့ သားအဖ တွေ ၊ ကလေး တွေ ဖွ ထားတာ ရှင်းရ၊ ကြမ်းတိုက်ရ၊ အ၀တ်လျှော်ရ၊မီးပူတိုက်ရ၊ ဈေးပြေးရ၊ ချက်ရပြုတ်ရနဲ့ တစ်နေ့လုံး ဖတ်ဖတ်ကို မောနေတာဘဲ။”
ဟဲ ဟဲ ရွာသူများ ကိုယ်စား ကြို ရန်တွေ့ပေးထားတာပါ။ :grin: :grin:
ဟုတ်ပ ကိုထူးဆန်းရယ် အိမ်အလုပ်ဆိုတာလွယ်တယ်မှတ်လို့
ထမင်းဟင်းချက်တတ်ရုံ အ၀တ်လျှော်တတ်ရုံနဲ့ အိမ်မှုကိစ္စနိုင်နင်းတာနဲ့ တခြားစီပဲ
ကိုယ့်အိမ်လေးကိုလည်း လှလှပပဖြစ်စေချင်ရင် ခေါင်းစဉ်တပ်လို့မရတဲ့ အလုပ်တွေကအများကြီး
အချိန်ကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲရသေးတယ် အိမ်ထောင်ဦးစီးပြန်လာရင်လည်း ချွေးပြန်နေတဲ့ရုပ်ကိုမြင်ရင် အမောမပြေမှာစိုးလို့ လှလှပပဖြစ်အောင်ပြင်ရသေးတယ်
ဒါ…. သက်တောင့်သက်သာလား (အိမ်ထောင်ရှင်မများကိုယ်စား)
တကယ်တော့ နှစ်ယောက်စလုံး နားလည်မှုရှိပြီးအချင်းချင်းပြေလည်ရင် ပြီးတာပါပဲကိုရှူံးလူရယ်
ကိုရှူံးလူကိုကြည့်ရတာလည်း သဘောကောင်းမယ့်ပုံဆိုတော့ မကြာခင်ကြုံတွေ့ရမယ့် အရေးအခင်းကြီးပြေလည်မှာပါ
နားလည်မှု ရှိလိုက်တာ မမမိုးရယ်….
ှဲစရိုက်ဆိုတာပင်ကိုယ်ရိုးရာ သူတကာဖြစ်နေကျထက် လွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်တတ်သော သဘောကိုခေါ်တာပါ
လူတွေမှာစရိုက်( ၆ )ပါးရှိကြလို့ အကျင့်စာဂတွေ တယောက်နဲ့ တယောက် မတူကွဲပြား ခြားနားကြပါတယ်
အမြင်ယူဆ သဘောသဘာဝတွေ မတူညီကြပါဘူး ယနေ့ ခေတ်လူငယ်လူရွယ်တို့ အပြင် သက်ကြီးရွယ်အို
အပါအ၀င် ဗုဒ္ဓိစရိုက် ရှိမြင်ကြရဖို့ လွန်စွာတွေ့ မြင်နည်းပါးလာကြပါတယ် မြင့်မြတ်တယ် မမြင့်မြတ်ဘူးဆို
တဲ့ခွဲခြားတဲ့အမြင်တွေလဲ အခုခေတ်ကာလမှာ မရှိသလောက်ပါဘဲ.. ယောက်ကျားမိန်းမရင်ဘောင်တန်းရှာဖွေကာ
စားသောက်နေထိုင်လာကြတာမို့ ပါ ကာမ၀ိတက် ကြံစည်စိတ်ကူးမှုတို့ နဲ့ စီးပွါးရှာဖွေနေထိုင် စားသောက်
လာကြတာမို. ယောက်ကျားမိန်းမ ခွဲခြားတာမျိုးတွေ မရှိသင့်တော့ပါဘူး မိန်းမတွေရဲ့ ဓမ္မတာကိစ္စက သဘာဝအလျှောက်မမြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရတာမို့ အထူးပြောစရာ လိုမယ်မထင်ပါဘူး ယုတ်ညံ့တယ်
မယုတ်ညံ့ဘူး ဆိုတာထက် မိန်းမနဲ့ ယောက်ကျား မတူကွဲပြားတာက ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်း သိမ်ဝင်ရ
သည့်အချိန် နဲ့ တန်ခိုးကြီးဘုရားတွေ ထိကိုင်မရ ခြင်းကသာလျှင် ဘုန်းကံမတူတာကို သိမြင်နိုင်လွယ်ပါတယ် မိန်းမမှန်က လုံးဝမရပါဘူး ဘာသာလူမျိုးမရွေး မိန်းမဆိုလျှင် မရပါ တခါက သီလရှင်တယောက်က သူ့ ရဲ့ အကျင့်စာဂသီလက်ို ယုံကြည်တယ်ဆိုပြီး ကျိုက်ထီးရိုး ဆံတော်ရှင်မြတ်ဘုရား
ရင်ပြင်တော်အတွင်း မိန်းမမ၀င်ရ နေရာကိုဆင်းဖို့ ဟန်ပြင်နေစဉ်အတွင်း မမျှော်လင့်ဘဲမိုးကြီး လေကြီးကျ
ရောက်ကာမဲမှောင်လျှက် မည်သည့်နေရာမျှ မမြင်ရအောင် တံခိုးပြသည့်အတွက် ရဟန်းရှင်လူ အကျင့် သူမြတ်တို့ ဝန်ချတောင်းပန်ကြရကာ သီလရှင်အားနှင်လွတ် ခဲ့ကြရပါသည် ဘုန်းကံမြင့်တာ နိမ့်တာကို ကိုယ်တွေ့ မျက်မြင်ယုံကြည် ခဲ့ရပါသည် ဗုဒ္ဓိစရိုက် သဒ္ဒါစရိုက် ရှိကြချေ ပါမူ မိန်းမဘ၀ကိုရကြပါ က
ယောက်ကျားတို့ ဘုန်းကံအားဖြင့်ယှဉ်၍မရပါကြောင်း သူ့ နေရာနှင့်သူ့ အမြင်ရှိကြပါစေကုန်ကြောင်း
ထပ်လောင်းကာပြောပြရင်း မိမိရဲ့ အမြင်လေးကိုအဆုံးသတ်ပါရစေ..။
ဘုန်းကံမြင့်မြတ်ဆိုတာ ယခု လုပ်ဆောင်ချက်ထက် လက်ရှိဘဝမှာ ခံစားစံစား အောင်မြင်ကျော်ကြား နေရမှုတွေကို အရင်ဘဝတခုခုရဲ့ ပြုခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ စပ်ဆက်ပြောသကွဲ့။ များသောအားဖြင့် အတိတ်ကံ လွှမ်းမိုးမှုကို လက်ရှိဘဝ ပြုမူအားထုတ်ချက်များနဲ့ မကာပြန်နိုင်ဘူး။ အဘိဓမ္မာအလိုတော့ စိတ်စေတသိက် အကျိုးသည် အလွန်ကြီးမားတယ်။ လုပ်ရပ်တိုင်းမှာ စေတနာပါတယ် (အကောင်းအဆိုး)။ စေတနာကိုပဲ ကံလို့ပြောထားတယ်။ ဒါကိုပဲ တလွဲသုံးတော့ ပိုရှုပ်ကုန်တယ်။ နင်က ထပ်ဖွတော့ ပိုရှုပ်တယ်။ ငါက မနေနိုင် ဝင်ပြောတော့ ပိုရှုပ်တယ်။ သဂျီးက ဘီယာမူးပြီး ဝင်နှောက်ရင် ပိုရှုပ်အုံးမယ်…..
တခုရှိတာ ယောက်ျား၊ မိန်းမ ရုပ်ခြင်းမတူဘူး၊ စိတ်နေသဘောခြင်း မတူဘူး။ အလွယ်ဆုံးပြောရရင် သတင်းနဲ့အတင်းဆိုတာ မြင်ကြည့်။ ချဲ့ကား ဟာသလုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့ ဆိုရင်းသဘောကို မြင်ကြည့်။ သဘာဝခြင်းမတူလို့ အလုပ်ခြင်းပါကွဲတယ်။ ရလာတဲ့ ဘဝကို အသုံးချတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်။ မတူတာကို တူအောင်သွားညှိရင် ညှိသူသာ အရူးဖြစ်တယ်။ တူနိုင်တာကို တူအောင် ညှိဖို့အားမထုတ်ပြန်ရင်လည်း အသုံးမကျသူဖြစ်တယ်။
နေပါအုံး.. နင်က ဘာကြောင့် အန်တီဝေလို့ ခေါ်သတုံး။ ဟိုက အခုမှ ၂၀ကျော်ရုံရှိသေး။ :eek:
ရှင်းနေတာကို ရှုပ်အောင်လုပ်နေကြတာနဲ့ ပြန်ရှင်းရခက်ကုန်ပြီ …
ထပ်ပြီး မရှုပ်ရလေအောင် ထပ်မရှင်းတော့တာပဲ ကောင်းပါတယ် …
ဒါနဲ့ ကိုကြောင်ကြီးပြောတာမှန်တယ် … ကျွန်မက အခုမှ ၂၀ကျော်ရုံရှိသေးတယ် … ၂၀ နှစ်လီတော့ မပြည့်သေးဘူးနော် ….
ရွံတဲ.လူကရွံ သလို … .ကုန်းယက်တဲ.လူလဲရှိတာဘဲ… တလွဲမထင်နဲ.နော်
ရာဇ၀င်မှာ ရွှေဘိုကအလောင်းမင်းတရားဟာ ညာလက်ရုံးက မိးထတောက်တယ်လို.
ဆရာတော် တွေကိုမေးကြည်.တော. ……..
ရှေ့ထုံးလည်းမပယ်နဲ့ ဈေးသုံးလဲ မကြွယ်နဲ့ တဲ့ …၊
ရှေ့ထုံးတွေကို ဖက်ပြီးလက်ကိုင်စွဲထားပြန်ရင်လဲ အတွေးပွါး ၊ အတွေးများစရာတွေက